Sekureva kwevamwe vaongorori Apple haisvike panhamba yemabhiriyoni matatu gore rino | Ndinobva mac
Sekureva kwevamwe vaongorori Apple haingasvike panhamba yemabhiriyoni matatu gore rino
Gore rapera Apple yakazosvika pamwero unoshamisa we maviri trillion kambani. Zvese fungidziro zvinoratidza kuti kambani icharamba ichikura uye kuti pasina mubvunzo ichasvika mabhiriyoni matatu. Mubvunzo ndewokuti izvi zvichaitika riini. Vamwe vaongorori vakafungidzira kuti ichave iri muna 3, asi mushumo mutsva unovimbisa kuti hazvizove kusvika gore rinotevera, ndiko kuti, kusvikira 2022.
Vanoongorora zvemari vanofungidzira kuti Apple inosvika pakukosha kwemabhiriyoni matatu emabhiriyoni. Iko hakuna kupokana nezve iyi feat, asi pane kusarudza kuti vachasvika riini. Vamwe vanoti richava gore rino 2021. Zvisinei, Daniel Ives weWedbush Securities, anosimbisa kuti hazvizove kusvika muna 2022 panosvika nhamba huru iyi.
Ives anofunga kuti iyo iPhone ichave inokonzeresa idzi dzinoshamisa manhamba. Iyo yekumusoro maitiro inonyanya kukonzerwa neiyo chirevo chekuwedzera kwekutengesa pamafoni efoni ekambani.
«Hatina kuona kukwidziridzwa kwekutanga kwetrajectory seiyi mumakore akati wandei yeApple uye chete yakafanana iPhone track rekodhi ingangove iyo iPhone 6 muna 2014 zvichibva pakuongorora kwedu »
Muongorori anotenda kuti Apple ine mukana weku ngara dzinopfuura mamirioni 240 mauniti mu2021, pamwe nekwaniso yekuti inogona kusvika kusvika kumamirioni mazana maviri nemakumi mashanu. Izvo zvakanaka pamusoro peiyo Wall Street yazvino fungidziro yemamiriyoni makumi maviri nemasere yeyuniti.
Vamwe vaongorori havabvumirani uye vanosimbisa kuti ichave iri muna 2021 apo chimiro chinoshamisa icho kusvika parizvino hapana kambani yakawana chasvika. Kunyanya kana runyerekupe rwazadziswa uye Apple inosimbisa kuvapo kweiyo kugadzirwa kweApple Mota.
Inogona kusvika pamufananidzo kwete yekutengesa zvishandiso, izvo nenzira haisi iyo chete iPhone, maMac ane M1 achave nezvakawanda zvekutaura, kana zvisiri zvezvikamu zviri pamusika wemasheya kutenda kune tarisiro yemotokari yemagetsi zvachose inogona kubuda mukambani yeAmerica.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Sekureva kwevamwe vaongorori Apple haingasvike panhamba yemabhiriyoni matatu gore rino
Mhete wedzera kumagumo-kusvika-kumagumo kunyorera kuvhidhiyo yako
Shanduko kumatemu ekugadzirisa MacBooks ine anti-inofungidzira yekumesa nyaya pazviratidziro